ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အက်စီတလင်းစွန့်ပစ်ထုံး filter ကိုစာနယ်ဇင်းစက်ဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ) - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeလေလံပွဲပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အက်စီတလင်းစွန့်ပစ်ထုံး filter ကိုစာနယ်ဇင်းစက် (TÜDEMSAŞ) ဝယ်ယူရမည်
26 / 10 / 2015 Levent Ozen လေလံပွဲ, အထွေထွေ, Institute, mal လေလံ, ရထားလမ်းစနစ်များပြက္ခဒိန်, TÜDEMSAŞ, တူရကီ 0
အက်စီတလင်းစွန့်ပစ်ထုံး filter ကိုစာနယ်ဇင်းစက်ဝယ်ယူရမည်
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 143715
ယောဘသည်ခေါင်းစဉ်: အက်စီတလင်းစွန့်ပစ် Lime Filter ကိုစာနယ်ဇင်းစက်
တင်ဒါအမျိုးအစား - လုပ်ထုံးလုပ်နည်း: ကုန်စည်များ၏ဝယ်ယူ - ပွင့်လင်းတင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်း
က) လိပ်စာ: KADI BURHANETTİN mAh ။ 58059
ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3462251818 - 3462235051
ဂ) e-mail လိပ်စာ: ihale@tudemsas.gov.t
ဃ) တင်ဒါ / prequalification စာရွက်စာတမ်း
အင်တာနက်လိပ်စာမြင်နိုင်ပါသည်: အ www.tudemsas.gov.t
2 - နုမှဘာသာရပ်ကုန်ပစ္စည်း
က) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်: 1 Specification များက Piece
ခ) Delivery [တည်နေရာ / နေရာများ]: Sivas ၏TÜDEMSAŞအထွေထွေညွှန်ကြားမှု
ဂ) Delivery [နေ့စွဲ / ရက်စွဲများ]: အဆိုပါစာချုပ်သည်အောက်ပါ 90 ကျထကျ၌အပျတျောမူလိမ့်မည်။
3- နူးညံ့ / prequalification /
ခ) နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 06.11.2015 - 15: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Air ကိုစာနယ်ဇင်းစက်ဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ) 19 / 07 / 2017 Air ကိုစာနယ်ဇင်းစက်ဝယ်လိမ့်မည်တူရကီရထားလမ်းစက်စက်မှုလုပ်ငန်း INC (TÜDEMSAŞ) တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2017 / 341506 ယောဘကိုခေါင်းစဉ်: Air ကိုစာနယ်ဇင်းစက်တင်ဒါအမျိုးအစား - လုပ်ထုံးလုပ်နည်း: ကုန်စည်များ၏ဝယ်ယူ - ပွင့်လင်းတင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်း 1 - ထိုအုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: KADI BURHANETTİN mAh ။ 58059 ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3462251818 - 3462235051 ဂ) အီလက်ထရောနစ်မေးလ်လိပ်စာ: ihale@tudemsas.gov.t သုံး) နူးညံ့ / prequalification စာရွက်စာတမ်းအင်တာနက်လိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါသည်: www.tudemsas.gov.t2ဖြစ်ပါသည် - တင်ဒါဘာသာရပ်ကုန်ပစ္စည်းများ) သဘာဝတရား အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်: အမှတ် 2092 1 Specification နံပါတ်ခအဆိုအရ) Delivery [နေရာအရပ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: CNC စာနယ်ဇင်းဘရိတ်စက်ကိုဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜVASAŞ) 01 / 12 / 2015 Entity အပိုဒ် 2015- 169668 ချုပ်ဝင်အပေါ်လေလံဆွဲသတင်းအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်. နူးညံ့ပြဿနာများ 1 / 1.1 အကြောင်းအရာ: အ GCC ၏ CNC စာနယ်ဇင်းဘရိတ်စက်TÜVASAŞညွှန်ကြားမှုအထွေထွေမှတ်ပုံတင်နံပါတ်ဝယ်ယူပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါစာချုပ်ဝင် Entity; က) အမည်: TÜVASAŞအထွေထွေညွှန်ကြားမှုခ) လိပ်စာ: Mithatpasa Mah, အမျိုးသားအချုပ်အခြာအာဏာ CAD ။ ။ အမှတ် 131, 54100 Adapazari / Sakarya / တူရကီဂ) တယ်လီဖုန်းနံပါတ်: 90 264 275 1660 ဃ) ဖက်စ်နံပါတ်: 90 264 275 1679 င) E-mail ကိုလိပ်စာ: သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ info@tuvasas.com.t: ငါ hyersoy@tuvasas.co နှင့် .com ။ f) Related ယူနစ်: နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်ဒါရိုက်တာ-xnumx.istekli ၏အရစ်ကျနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနနုများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးဌာနခွဲကနေရရှိနိုင်ကြသည်။ နုအပိုဒ် 1.2- ၏ဘာသာရပ်အပေါ်ပြန်ကြားရေး ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ရိုးဖယ်ရှားရေး Tool ကိုစာနယ်ဇင်းစက်ဝယ်ထည့်သွင်းခြင်းပါလိမ့်မယ် 15 / 12 / 2016 စာနယ်ဇင်းစက် Installing ACS အဖွဲ့ဖယ်ရှားရေးကုန်စည်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစီးပွားရေးဧည့်ခံ 4734 အမှတ်စာနယ်ဇင်းစက်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး Installing ရထားလမ်းစနစ်ဌာနတူရကီက Metro စီးပွားရေးရိုး Kit ဖယ်ရှားရေး၏အတ္တအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးကိုဝယ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2016 / 265091 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ရဲတပ်ဖွဲ့အိမ်နီးချင်းပြိုင်ကားကွင်းရိပ်သာလမ်း Blok အဘယ်သူမျှမ:506330 ။ YENİMAHALLE / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3125071087 - 3125071330 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: ali.altuner@ego.gov.t သုံးခုသည်) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းမြင်နိုင်ပါသည် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Eskişehir Wagon အောက်ဆီဂျင်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို Maintenance ညွှန်ကြားမှုနှင့်အက်စီတလင်းဓါတ်ငွေ့လိုင်းပစ်ခတ်မှု Repair 17 / 11 / 2015 Wagon ပြုပြင်ခြင်းနှင့်အောက်ဆီဂျင်နှင့် STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)2၏ TC အထွေထွေဒါရိုက်တာရိုက်ကူးအက်စီတလင်းဓါတ်ငွေ့လိုင်း၏ကို Maintenance အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲEskişehirညွှန်ကြားမှု။ တစ်ဝိုက်ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲရေးESKİŞEHİR Wagon ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစျေးဆိုင်စီမံခန့်ခွဲရေးနညျးပညာအထူးအောက်စီဂျင်နှင့်အက်စီတလင်းဓါတ်ငွေ့ LINE အညွန့်ဧည့်ခံလူထုဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 153960 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Anadolu Boulevard Behicbey YENİMAHALLE / တူရကီခမှတဆင့်) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3122111449 - 3122111225 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: က c) ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စွန့်ပစ် Lime ရွှံ့နွံရေကူးကန်ဆောက်လုပ်ရေး (TÜDEMSAŞ) 23 / 03 / 2015 စွန့်ပစ် Lime ရွှံ့နွံရေကူးကန်တူရကီရထားလမ်းစက်စက်မှုလုပ်ငန်း INC ဆောက်လုပ်ခြင်း (TÜDEMSAŞ) စွန့်ပစ်ထုံးရွှံ့နွံအတိုင်ကီတည်ဆောက်နေဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 29812 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: KADI BURHANETTİN mAh ။ 58059 SÝVASဗဟို / SİVASခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3462251818 / 4699 - 3462235051 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: https://ekap.kik.gov.tr/: ihale@tudemsas.gov.t သုံးခုသည်) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းအင်တာနက်လိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည် ၏နူးညံ့သောဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်၏ ECAP / 2-အကြောင်းအရာ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စောင်းလှည်း bogie ထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုခံရဖို့ပစ္စည်းများအမျိုးမျိုးဖြစ်ရလိမ့်မည်, (TÜLOMSAŞ)
DEIK ဥက္ကဋ္ဌ UTIKAD နိုင်ငံတော်သမ္မတ Turgut Selected Erkeskin ၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစီးပွားရေးကောင်စီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Air ကိုစာနယ်ဇင်းစက်ဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: CNC စာနယ်ဇင်းဘရိတ်စက်ကိုဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜVASAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ရိုးဖယ်ရှားရေး Tool ကိုစာနယ်ဇင်းစက်ဝယ်ထည့်သွင်းခြင်းပါလိမ့်မယ်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Eskişehir Wagon အောက်ဆီဂျင်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို Maintenance ညွှန်ကြားမှုနှင့်အက်စီတလင်းဓါတ်ငွေ့လိုင်းပစ်ခတ်မှု Repair
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆိုပါ bandsaw စက်တွေဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Bogie ဆုံလည်ခုံဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Band Sawing စက်ဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လျှော်စက် Bench ဘီး Kit စီးရီးဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Bogie LIFT နှင့် Rotate စက်ဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ)
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ စက်တင်ဘာလ 2019 (299) သြဂုတ်လ 2019 (507) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)